नाटक भर्सेज नौटंकी
घाटगाउँ डटकम शनिबार, माघ १७, २०७७, २३:१७:००
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच देशमा नौटंकी चलिरहेको छ। उनीहरु केवल सत्ताका लागि । स्वार्थका लागि । आफ्नो हितका लागि । कुर्सीका लागि नौटंकी गरिरहेका छन् ।
देशमा गतणन्त्र, संघीयता ल्याएको दाबी गर्ने प्रचण्ड यतिबेला सत्ता केन्द्रित छन् । सत्ताका लागि प्रचण्ड यतिबेला जस्तोसूकै सम्झौता गर्न पनि तयार छन् । नेपालको एक मात्रै राष्ट्रवादी नेता आफू हो भन्ने भ्रम पालेका ओलीले संविधानकै घाँटी निमोठेर शासनसत्ता चलाइरहेका छन् ।
यसले जनतालाई त सास्ती दिइरहेकै छ, नेताहरुको असली चेहरा पनि जनतासामु छर्लंग भएको छ । बाहिर देशका लागि, जनताका लागि, भविष्यका लागि र स्वार्थका लागि नेताहरु मात्रै झुटो नाटक देखाइरहेका छन् ।
ओली र प्रचण्डहरु यतिबेला शक्तिका लागि लडाई गरिरहेका छन् । ओली र प्रचण्डका कारण देश बन्धकीमा छ । देशलाई बन्धकी राखेर ओली र प्रचण्डले नाटक गरिरहेका छन् ।
एक अर्काविरुद्ध तिखा टिप्पणी गरेर नौटंकी गरिरहेका छन् । सुन्दा कुनै टेलिसिरियलको कथा र व्यंग्य जस्तो लागेपनि वास्तवमै ओली र प्रचण्डले देश बेचिने अवस्थामा पुर्याएका छन् । तर पनि यतिबेला भने नेपाली जनता कोही प्रचण्डतिर छन् । कोही ओलितिर छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला ओली र प्रचण्डका दुई वटा शब्दहरु चर्चित छन् । प्रचण्डले नाटकै हो भनेको अनि ओलीले नौटंकी नै हो भनेको शब्द । एकले अर्कालाई वास्तविक राजनीतिक भाषा नभई कुनै व्यंग्य र रंगमञ्चका लागि तयार पारिएको डायलग जस्ता शब्द फ्याकिरहेका छन् ।
एउटाले अर्कोलाई नाटक र नौटंकी भनेर नेपाली राजनीतिलाई लज्जित तुल्याएका दुवैको भनाई यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । खासगरी एकले अर्कोलाई भएभरका शब्द खर्चेर आलोचना गरिरहदा देशलाई के फाइदा भइरहेको छ ?
यसतर्फ कसैको ध्यान छैन् । उनीहरुका कार्यकर्ताले जनतालाई मुठ्ठीमा लिएका छन् । कार्यकर्ताले जनतालाई पैसा, आश्वासन र पदको लोभ देखाएर आकर्षण देखाईरहेका छन् । तर यसले गर्दा जनतालाई कति फाइदा भएको छ ? भन्ने कुरा कसैलाई पनि गम्भिर चिन्ता छैन् ।
तर ओली र प्रचण्डको पदीय लडाईले गर्दा तीन करोड जनता दुःखी छन् । उनीहरुको गास, बास र कपासको समस्या उत्कर्षमा छ । जनतालाई रोग, भोक र शोकको चिन्ता छ । तर पनि नेताहरुलाई यसको मतलब छैन् ।
नेता कार्यकर्ताले देश खोक्रो बनाएका बेला जनताको अवस्था झन डरलाग्दो छ । तर पनि यसबारे नेताहरुलाई चिन्ता छैन् । यसले आखिर जनता नेताका लागि भेडा बाहेक केही होइनन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपालमा राजनीतिक खिचडी पाकिरहेका बेला देश भारतको बन्धकीमा छ । नेपालमा भारतले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ । उसले चाहेको कुरा नेपालमा हुँदा नेताहरु मात्रै नेपालका हुन् । बाँकी देश र अधिकार भने भारतको हुन्छ ।
नेपालमा संविधान घोषणा हुँदा मात्रै भारतले आफ्नो बल प्रयोग गर्न सकेन । बाँकी हरेक क्षण र राजनीतिक घटनाक्रममा भारतले नेपालका नेताहरुलाई कब्जामा लिएको छ । नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ ।
धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको भनेपनि यो योजना भारतको हो । नेकपालाई फुटाउने अस्त्रका रुपमा भारतले ओलीबाट संसद विघटन गरेर नेताहरुलाई दुई कित्तामा उभ्याएको हो । जसबाट प्रत्यक्ष रुपमा देशलाई घाटा भएको छ । तमासा भएको छ । तर भारतलाई फाइदै फाइदा छ ।
दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको भारत सबैलाई फनफनी नचाउन चाहन्छ । पैसा खर्च गरेर, बल प्रयोग गरेर भएपनि आफ्नो कब्जामा ल्याउन चाहने भारत नेपालमा पनि त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरिरहेको छ । जुन नेपाली जनतालाई थाहा छैन् । तर नेताहरु केवल प्रयोगशाला बनाएका छन् ।
आज देशका ठाउँ ठाउँमा नेताहरुले विरोध सभा गरिरहेका छन् । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विरोध सभा भइरहेका छन् । हजारौ पैसा तिरेर कार्यकर्ता जम्मा पारिएका छन् । आखिर त्यो पैसा कहाँबाट आएको छ ? यो कसैलाई थाहा नहुन सक्छ । तर अहिले पनि एकले अर्कोलाई सिध्याउने प्रपञ्चमा लागेका नेताहरु देशको भलाईका लागि भन्दा भारतको चाकरीका लागि इमान्दार भइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७, २३:१७:००
सुनको मूल्य फेरी घट्यो शनिबार, माघ १७, २०७७, २३:१७:००
खुल्न थाले शक्तिपीठ शनिबार, माघ १७, २०७७, २३:१७:००
क्याम्पसमा गोली चल्दा आठ जनाको मृत्यु शनिबार, माघ १७, २०७७, २३:१७:००
हिलोले कर्णाली राजमार्गमा सवारी साधनलाई सास्ती शनिबार, माघ १७, २०७७, २३:१७:००